Ukuchaneka kwesampulu, ukulungiselela, ukubumbeka, ukuphatha, ubunzima kubaluleke kakhulu kwi-FRIAYIng,
Kuba iimpazamo ziya kuba nefuthe kwi-0.0001 Gokugqibela yegolide nge-Ostramination, ukuba ingenziwa ngendlela engafanelekanga, isebenzisa iindlela zenzululwazi, kwaye ingqalelo encinci ehlawulwa kwinkqubo ye-Assay.
Kubalulekile ukukhetha i-Assing Righ of Doy Assey Clay Crubible
Ubungakanani obuqhelekileyo buyamkelekile.Umgangatho osemgangathweni kunye nenkonzo ekhawulezayo zisukelo lwethu.
I-Assay Assay Drubs Yiba nenqanaba eliphezulu kunokungcungcutheka okuqhelekileyo ukuze uqhekeke phantsi kweemeko zexabiso lomlilo. Iinqaba zethu zisetyenziswa kwiilebhu zaphela kwindawo yentengiso yamanye amazwe. Sineemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu obufumanekayo kwi-COTE KOKUFUNA.
Imbetheko yethu inika ubomi obude, ukukhawuleza ukunyibilikisa, ukukhawulezisa ngokukhawuleza kunye nokungaxhathisi okhethekileyo kwiqondo lobushushu lobushushu.
Into: I-Assay yomlilo Kubethelelwe
Uhlobo lwenkqubo: Ukuqengqeleka
Izixhobo: Sio2 + Al2 +1
Indawo: Ezenzekelayo izixhobo zokubumba
Ukuhambisa ngenqanawe: Izitokhwe ezininzi, Ukuhambisa ixesha malunga neentsuku ezingama-5-10. ngolwandle okanye ngomoya njengomthengi isicelo
Ukuhanjiswa& Inkonzo: Ngexesha elifanelekileyo Ukuhanjiswa ngexesha ngalinye. Nikezela ngenkonzo ethembekileyo kwaye unoxanduva Umthengi ngamnye ngemveliso nganye. Bethu Ithagethi kukwanelisa abathengi ngeyona nkonzo ilungileyo.
L.O.i (ilahleko kwi-insition) I-0.21%